I-IWCA Online Collaborative – International Writing Centers Association
Ukuhlanganyela: Mashi 9, 2022
Yiya ku Isayithi lelungu le-IWCA ukubhalisa
Uyamenywa ukuthi ulethe isiphakamiso se-IWCA Online Collaborative-Isicelo Seziphakamiso singezansi. Njengoba siqhubeka nokubhekana nalolu bhubhane kanye nomthelela wawo emsebenzini nasenhlalakahleni yethu, sithemba ukuthi lolu suku ngokubambisana luzosinikeza ithemba namandla, imibono kanye nokuxhumana.
Obizweni lwakhe lweNgqungquthela Yonyaka Yama-CCCC ka-2022, uSihlalo Wohlelo u-Staci M. Perryman-Clark usimema ukuba sizindle ngombuzo othi, “Kungani ulapha?” kanye nokucabangela umuzwa wokuba phakathi kwethu nabafundi bethu esingaba nawo noma singabi nawo ezindaweni zethu.
Njengoba siqhubeka nokuzulazula kubhubhane lwe-COVID19 esinaso, futhi sihambisa ingqungquthela ku-inthanethi, sikhathele ngenxa yolwazi olungaguquki nolungqubuzanayo kanye nezinqubomgomo mayelana nokufihla ubuso, imigomo, nokusebenza ekhaya—siphendula kanjani isimemo sikaPerryman-Clark sokumelana, ukuze sisinde , ukusungula izinto ezintsha, nokuchuma? Sibamba iqhaza kanjani “emsebenzini wesibindi [o]bucayi futhi osaqhubekayo”? (URebecca Hall Martini noTravis Webster, Izikhungo Zokubhala Njengezikhala Ezinesibindi: Isingeniso Sodaba Olukhethekile Ukubuyekezwa Kontanga, Volume 1, Issue 2, Fall 2017) Ku-paradigm entsha ye-hybrid, online, virtual, kanye nokufundisa ubuso nobuso, izikhala nezinsizakalo zesikhungo sokubhala zingaqhubeka kanjani zivuleleke kubo bonke abafundi? Ngokusebenzisana kwe-IWCA Online ka-2022, kumenywa iziphakamiso kusetshenziswa le mibuzo elandelayo njengamapulangwe:
Ngabe umsebenzi wobulungiswa bezenhlalakahle ubukeka kanjani ezikhungweni zethu? Ubani ozizwa emenyiwe ezikhaleni zethu futhi ubani ongamenyiwe? Senzani ukuqinisekisa ukuthi abasebenzi bethu, abafundi esibasebenzelayo bayasinda? Yini esiyenzayo ukuze senze okungaphezu kokusinda, kodwa ukuze siphumelele?
Ku-2022 IWCA Online Collaborative, simema iziphakamiso zamaseshini agxile ekwesekaneni ekwakhiweni nasekuhlolweni, futhi sigxile enqubweni, hhayi emkhiqizweni, wocwaningo. Amaseshini kufanele enze okukodwa noma ngaphezulu kwalokhu okulandelayo:
Mema ozakwethu abahlanganyeli ukuthi baxoxisane, bacabange, noma bathuthukise isizathu sezindawo ezingaba khona/izikhombisi-ndlela zocwaningo lwesikhungo sokubhala mayelana nokubandakanywa
Qondisa ozakwethu ababambiqhaza ngezindlela zokusebenzisa ucwaningo lwesikhungo sokubhala ukuze sithwebule kangcono izinga lomsebenzi esiwenzayo, okwenza izindaba zethu zidonse izethameli eziningi esizibandakanyayo ngaphakathi nangaphandle kwezilungiselelo zethu zesikhungo.
Nika amandla abanye ababambiqhaza ukuthi basungule ocwaningweni lwesikhungo sokubhala, okuhlanganisa ukumelana nemikhawulo noma izinkinga ezihambisana namasiko abesilisa, abamhlophe, abanekhono, kanye nekoloniyalist esikoleni.
Yabelana ngemisebenzi eqhubekayo ukuze uthole impendulo evela kwabanye ochwepheshe besikhungo sokubhala nabafundisi
Qondisa ababambiqhaza ngezindlela esingaguqula ngazo izinhloso zabo ezinhle mayelana nokubandakanywa kanye nokulwa nokucwasa zibe izinyathelo ezibambekayo zokwenza.
Qondisa ababambiqhaza ukuthi baxoxisane futhi bahlele ukuthi indawo yethu yesikhungo sokubhala, indlela yethu, kanye/noma injongo ingashintsha kanjani njengoba sibheka ukuthi i-COVID iyithinta kanjani indawo yethu yokusebenza.
Mema ababambiqhaza ukuthi bakhe izinhlelo zokusebenza ukuze bamelane, baphile, basungule izinto ezintsha, futhi baphumelele
Kungashiwo ukuthi amandla enkundla yethu imvelo yethu yokubambisana—simema ababambiqhaza ukuthi bahlangane ukuze sijulise ukuqonda kwethu—nokuxhumana—nokuhlukahluka, ukulingana, nokuhlanganisa yonke indawo lapho izikhungo zokubhala zikhona.
Ngenxa yokuthi Ukusebenzisana kumayelana nokwesekana ekwakhiweni nasekuhlolweni, iziphakamiso kufanele zigxile enqubeni, hhayi emkhiqizweni, wocwaningo; silondoloze ifomethi eyodwa ekhethekile—“Ideshi Yedatha”—yenani elilinganiselwe leziphakamiso ezigxile ekwabelaneni ngemiphumela yocwaningo. Zonke iziphakamiso, kungakhathaliseki ukuthi zinjani, kufanele zizame ukugxilisa umsebenzi phakathi komfundaze wesikhungo sokubhala kanye/noma umfundaze weminye imikhakha.
Ama-workshops (imizuzu engama-50): Abagqugquzeli bahola ababambiqhaza emsebenzini wokusebenzisana, wolwazi ukuze bafundise amakhono abambekayo noma amasu ahlobene nocwaningo lwesikhungo sokubhala. Iziphakamiso eziyimpumelelo ze-workshop zizobandakanya isikhathi sokudlala ngemibono yasetiyetha noma ukuzindla ngokusebenza ngempumelelo komsebenzi noma amakhono atholiwe (ingxoxo yeqembu elikhulu noma elincane, izimpendulo ezibhaliwe).
Izikhathi ezijikelezayo (imizuzu engama-50): Abagqugquzeli bahola ingxoxo ngodaba oluthile oluhlobene nocwaningo lwesikhungo sokubhala; le fomethi ingase ihlanganise amazwi amafushane avela phakathi kwabethuli abangu-2–4 alandelwe ukuxoxisana/ukuhlanganyela okusebenzayo nokuzwakalayo nabahambele umcimbi okushukunyiswa imibuzo eyisiqondiso.
Imibuthano Yokubhala Ngokuhlanganyela (imizuzu engama-50): Abagqugquzeli baqondisa ababambiqhaza emsebenzini wokubhala weqembu okuhloswe ngawo ukukhiqiza idokhumenti ebhalwe ngokuhlanganyela noma izinto ezisetshenziswayo ukusekela ukubandakanywa.
Izingxoxo zikaRobin (imizuzu engama-50): Abagqugquzeli bethula isihloko noma itimu futhi bahlele ababambiqhaza babe ngamaqembu amancane ukuze baqhubeke nengxoxo. Ngomoya wemiqhudelwano “ye-round robin”, ababambiqhaza bazoshintsha amaqembu ngemuva kwemizuzu eyi-15 ukuze banwebe futhi bandise izingxoxo zabo. Okungenani ngemva kwemizuliswano emibili yengxoxo, abagqugquzeli bazophinda bahlanganise iqembu eliphelele ukuze kuxoxiswane okuphetha.
Izethulo zeDashi Yedatha (imizuzu eyi-10): Yethula umsebenzi wakho ngendlela ye-20×10: amaslayidi angamashumi amabili, imizuzu eyishumi! Lokhu okuhlukile kweseshini yephosta kuhlinzeka ngendawo elungele izinkulumo ezimfushane, nezethameli ezijwayelekile eziphelezelwa yizinto ezibonakalayo. I-Dash Dash ifaneleka kakhulu ukubika ngocwaningo noma ukudonsela ukunaka endabeni eyodwa noma ukusungula izinto ezintsha.
Ama-workshops Okuqhubekayo (imizuzu eyi-10 ubukhulu): Amaseshini e-Works-in-Progress (WiP) azokwakhiwa ngezingxoxo ze-roundtable lapho abethuli bexoxa kafushane ngamaphrojekthi abo amanje ocwaningo bese bethola impendulo evela kwabanye abacwaningi okuhlanganisa abaholi bezingxoxo, abanye abethuli be-WiP, nabanye abahambele izingqungquthela abangase bajoyine ingxoxo.
Ukuthunyelwa kufanele: February 20, 2022
Ukuhambisa isiphakamiso futhi ubhalisele Ukuhlanganyela, vakashela https://iwcamembers.org.
Imibuzo? Xhumana nenkomfa omunye wezihlalo, u-Shareen Grogan, shareen.grogan@umontana.edu noma uJohn Nordlof, jnordlof@eastern.edu.